हाम्रो देश को इतिहास लामो विवादास्पद र अक्सर पनि प्रसिद्ध मान्छे को भाग्य छ जमीन थिए मिल मा भयानक घटनाहरू पूर्ण भएको छ। एक हडताली उदाहरण Sergey Khudyakov, व्यक्तित्व र हामी यो कागज को पृष्ठ मा तपाईं बताउन छौँ जो दुःखद जीवन को रहस्य छ। तुरुन्तै, हामी जस्तै आफ्नो जीवनी हामी 1918 देखि 1946 को भयो कि घटनाहरूको बारेमा सानो थाहा किनभने, बस, अवस्थित छैन भनेर याद गर्नुहोस्। यस उल्लेखनीय मानिसको वास्तविक जीवन कथा, र यो असम्भाव्य यसलाई एक पटक हुनेछ छ। किन? हामी तपाईंलाई हाम्रो लेख पढ्न सुझाव दिन्छौं।
एक आर्मेनियाली परिवारको कथा
उहाँले एक पटक ठूलो र अनुकूल परिवार Artem Hanferyantsa आर्मेनिया बस्थे थियो। तिनीहरूले महान् Taghlar (Mets Taghlar) मा स्थित छ को गाउँमा बस्थे नागोर्नो-कराबाख। Armenak, Avak र Andranik (अन्तिम नाम एन्ड्रयू र Arkadi रूपमा रूसी अनुवाद छन्): Artyom तीन छोराहरू थिए। वरिष्ठ Armenak, सिक्न उल्लेखनीय क्षमता देखाए, तर किनभने 1915 मा उहाँले बाकु पठाइएको थियो। उहाँले त्यहाँ नयाँ oilfield लेखापाल त्यो समयमा काम गर्ने आफ्नो मामा, बस्थे। Alas, उहाँले पर्याप्त पैसा छैन, तर किनभने अध्ययन भूल थियो।
उहाँले काम थियो। जो भर्खरै Armenak थिएन: उहाँले एक मछुवा, र पनि telephonist हुन भएको थियो। 1918 मा, क्रान्तिकारी आन्दोलन बाकु मा सुरु भयो। यस समयमा, Armenak आफ्नो आमा भ्रमण थियो। अराजकता थाले: interventionist सेना को आश्रम overthrew ... पुत्र अन्तिम डुङ्गा मा आमा राखे। त्यो अझै पनि आफ्नो Armenak सम्झना: अग्लो, सुन्दर, उहाँले उसलाई आफ्नो काँध मा एक राइफल संग डकमा खडा पछि लागे। त्यतिबेलादेखि आमा र बाबुले आफ्नो छोरालाई किनभने तिनीहरूले केहि थाहा थिएन आफ्नो भाग्य आफ्नो क्यारियर को अन्त सम्म, मृत्यु विश्वास गरे। प्रतीक्षा, तर कसरी जडान Sergey Khudyakov अर्मेनियाई परिवारको इतिहास संग? सबै उत्तर - hereinafter।
अनिश्चितता र दुःखद घटना
Andranik पनि आफ्नो दाइ बारे केहि थाहा थिएन। उहाँले राजनीतिक नेता को पोस्ट गर्न भनिएको थियो, 1941 मा संस्थान देखि स्नातक र हराइरहेको पहिलो राउंड्स हराएको थियो। Avak मात्र आफ्नो दाजु बाकु मा गृहयुद्ध को flames मृत्यु थियो भनेर सिके। Alas, यो धेरै दुःखी परिस्थितिमा भयो।
उसलाई र 1946 मा सबै सक्षम-bodied परिवारका सदस्यहरूले सोधपुछ लागि बोलाए थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूका तिनीहरूले Armenak Hanferyantse बारेमा थाहा सक्ने सबै रुचि थियो। तर तिनीहरूले के भन्न सक्छ? लगभग सबै पुराना समय द्वारा बितिसकेका, र उहाँले 1918 मा Andranik निर्दोष Maltsev थियो, र किनभने लगभग कुनै स्मृति। "सायद, अझै पनि जीवितै दाजु: जांच मात्र आशा भड्काए? के उहाँलाई भयो? " सबै प्रश्न अनुत्तरित बाँकी थियो। सबै आवश्यक तिनीहरू दस वर्ष सक्षम थिए जानकारी प्राप्त।
शोकमा परिवार Khudyakov
मार्शल Khudyakov उड्डयन Sergey र समयमा आफ्नो परिवारको पनि टाढा राम्रो दिन अनुभव। Varvara Petrovna, आफ्नो पत्नी, को अन्वेषक कार्यालय मा लामो wanderings पछि मात्र उनको पति को गिरफ्तारी बारे फेला बाहिर सकेन। कुनै विवरण यो रिपोर्ट छैन। मात्र 1949 मा, त्यो छानबिन भन्दा छ कि सिके। एकै समयमा बारबरा यसो भन्दै आश्वासन दिनुभयो सबैभन्दा खराब भनेर - सेना देखि उनको श्रीमानको राजीनामा दिए।
तर सर्गेई Khudyakov, परिवार फर्के कहिल्यै। जनवरी 1951 को बीचमा आफ्नो पत्नी र जवान बच्चा क्रास्नायार्स्क क्षेत्र गर्न deported थिए। त्यहाँ पनि भयो र पुरानो, व्लादिमीर Khudyakov को अपनाए छोरा। थियो जो तिनलाई लाल तारा को आदेश, लगभग shamefully लप्टन ... उमेर को दर्जा मा सेना देखि निकाल। यो परिवार सबै सदस्यहरू एक पिता भनेर बाहिर गरिएका - "। एक देशद्रोही"
र यो छ - सबै परिवार दुःख befell कि परीक्षा! तथ्यलाई कुर्स्क Hudyakov Sergey Aleksandrovich युद्ध अगाडि, उनको पहिलो बच्चा, विक्टर लिए पछि छ। तर Kharkov विक्टर र उहाँले शत्रु हावा छापे अन्तर्गत आए मा, जो केटा मृत्यु भएको थियो। त्यसैले उनको श्रीमानको गिरफ्तारी को समयमा Varvara Petrovna पहिले नै फुरतीला sipped थियो। मास्को Khudyakov फिर्ता मात्र 1953 मा दिनुभयो।
एउटा सानो सर्गेई संग Varvara चाँडै तिनीहरूले बस बाँच्न कतै थियो रूपमा, Izyaslav गए, र व्लादिमीर राजधानी मा रह्यो। उहाँले असाध्यै उहाँले उत्तरार्द्ध को भाग्य सत्य फेला पार्न निर्णय, आफ्नो सौतेनि प्रेम, तर कुनै जानकारी समयमा प्राप्त गर्न सकेनौं। केवल मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय को काम मार्फत सत्य फेला पार्न असफल भयो।
एउटा नाम के हो?
अगस्ट 1954 को अन्त्यमा मामला र शट मा एक "मातृभूमि गर्न देशद्रोही" को रूपमा मान्यता थियो 1950 मा उत्तरार्द्ध, सर्गेई Khudyakov को सामाग्री अनुसार 100384. № छलफल भएको Donskoy चिहान मा sentencing को दिन। यो एकदम अक्सर ती दिन, अक्सर वाक्यको प्रवर्तन पछि, retroactively जारी गर्न मुद्दा चलाउने व्यक्ति दें।
अभियोजक राम्ररी कागजातहरू को सार मा delved र निर्णय गरे: को पत्ता तथ्य जडानमा मामला पुन: खोल्न। र पहिलो पटक लागि, मुद्दा चलाउने व्यक्ति को हस्ताक्षर र छाप समावेश जो कि कागजात, साँचो नाम र कार्यान्वयन एयर मार्शल को थर उभिए। यो Hanferyants Armenak Artemovich थियो। "नयाँ परिस्थितिमा जडानमा" एउटै 1954 मामला मा, यो बन्द भएको वाक्य रद्द र Sergey-Armenak posthumously acquitted र rehabilitated थियो गरिएको छ।
के मार्शल को परिवार भयो?
1956 को अन्त सम्म ठूलो Taghlar को नातेदार उनको मार्शल Sergeem Hudyakovym गर्न दाइ छुटेको पहिचान भएन। त्यतिबेला बस कुनै पनि खुला कागजात, यी नाम सँगै ल्याउन सक्छ जो छैन।
1954 मा Sergey संग Varvare Hudyakovoy मास्को फर्कन अनुमति दिइएको थियो। Tishinskaya वर्ग विधवा मा छुट्टै अपार्टमेन्ट विनियोजन गरेको छु। त्यसै वर्ष मा व्लादिमीर उहाँले अगस्ट 1988 सम्म आयोजित जहाँ सक्रिय सैनिक सेवा, मा पुनर्स्थापित। व्लादिमीर एस कर्णेल गर्न बढुवा भएको थियो, आज यो अब जीवित छ। आफ्नो रह्छ चिहान Butovo मा आराम। 1956 मा, त्यो सर्गेई Khudyakov जसको तस्वीर कागज मा छ, मार्शल को श्रेणीका पुनःस्थापित भएको थियो, उहाँले posthumously सबै पुरस्कार पुनःस्थापित भएको थियो। को मार्शल को नाम को Presidium को निर्णय पछि दुई हप्ता पार्टी सदस्य को सूची मा reintroduced थियो।
यो दिन, म एक्लै बस्ने सर्ज ... उहाँले brilliantly स्कूलमा, 1963-1965 वर्ष तारा शहर सैनिक सेवा पारित बीच अवधिमा। उहाँले विभाग को सारा को आरोप मा, विज्ञान डाक्टर को डिग्री प्राप्त, मास्को राज्य संस्थान देखि स्नातक। आज Sergey को काम राज्य विश्वविद्यालय व्यवस्थापन को। प्रेम र आदर शिक्षक र विद्यार्थी, जसलाई केही व्यक्तिको को परिवार को कठिन भाग्य बारेमा जान्न थाहा छैन।
रहस्य Khudyakov। Armenak सर्गेई गर्न गरिएका रूपमा?
को मार्शल कार्यान्वयन थियो किन यति, के, के गर्नुभयो? र Armenak अचानक सर्गेई थियो? किन त सर्गेई Khudyakov (फोटो तपाईं यो सामाग्री मा देख्न सक्नुहुन्छ) भनेर भयो छ आफ्नो मूल बारेमा जो कोहीले बताउन थिएन?
डिसेम्बर 1945 मा, मार्शल मास्को मा Mukden देखि बोलाए। उहाँले साथीहरू र सहकर्मीहरुको भेट भएको थियो जहाँ चिटा, योजना बनाए Transplanting। तर सर्गेई एयरफील्ड संग "SMERSH" को कर्मचारी संग कार लिए। तब देखि, कुनै एक जहाँ हराइरहेको Sergey Khudyakov थाह थियो। जीवनी बडे अधिकारी अन्त आउने ...
जो किन गिरफ्तारी छ?
व्यावहारिक सबै सोभियत प्रकाशनहरू घटना त्यतिबेला भयो कि एक घटना सँग सम्बन्धित। को Mukden को समयमा विमान Manchukuo को राज्य को "सम्राट" पूरा पठाइएको थियो भन्ने तथ्यलाई। उहाँले समस्या बिना मास्को गर्न उड्यो। त्यो जो कठपुतली समर्थक-जापानी सरकार सबै Jewels पूरा भएको थियो मात्र दोस्रो माल ढुवानी गर्ने जहाज, छ, बस गायब।
निस्सन्देह, यो SMERSH राम्रो यो बारेमा प्रश्नहरू हुन सक्छ, तर विमान को दृढ विश्वास भने थियो शब्द छैन। शक 1952 मा मार्शल हटाइएको छ: को बिरामी-fated माल ढुवानी गर्ने जहाज र चालक दल को जंगल भाचिएको बस्तु फेला शिकारी रहनेछ। उहाँले शायद किनभने एउटा असफल इन्जिन लडे। त्यसैले के सर्गेई Khudyakov दोष छ? आफ्नो जीवनी यथार्थ जवाफ दिन छैन।
सायद, आफ्नो गिरफ्तारी विमान कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उहाँले दावी छैन जो हुन - शायद SMERSH पहिले नै शानदार मार्शल भेट्टाए थियो। आफ्नो व्यक्तिगत फाइल मा नाम र थर को परिवर्तनको बारेमा कुनै जानकारी छैन। रूसी, भोलोग्डा एक सरल परिवार आउँछ - यसको विपरीत, मार्शल आफूलाई सधैं उहाँले भन्नुभयो। , सबै 20s मा typhus को मृत्यु तिनीहरूले लामो मरेको छ, भन्न: उहाँले Varia मा भेट्दा उहाँले कहिल्यै आफ्नो भविष्य पत्नी आफ्नो परिवारलाई सोधे। निष्पक्षता मा यो गिरफ्तारी लागि कारण अझै पनि थिए किनभने यस्तो फर्क कुनै पनि सामान्य सुरक्षा सेवा रुचि हुन, तर भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
Varvara, व्लादिमीर र सर्गेई आफ्नो मृत्यु पछि आफ्नो नातेदार को आर्मेनियाली जरा बारेमा सिके। मार्शल पत्नी त्यो एक मूल जस्तै अभिवादन थियो जहाँ Sergey-Armenak, को घर गाउँ भ्रमण गर्नुभएको थियो। परिवार हानि को दुखाइ साथ दिए। Armenak सबै आफ्नो मृत्यु नेतृत्व जो यो सारा साहसिक, सुरु गर्दा किन र: यो बिन्दुमा, जसलाई बीचमा धेरै पक्ष र सैन्य नेताहरूले थिए सबै आफ्नो नातेदार, सबै प्रश्नको जवाफ खोजी गर्न थाले?
यस दिन कुनै जवाफ छ, र अभिलेखीय कागजातहरू मा यस रहस्य ज्योति बगाएको सक्ने कुनै जानकारी छ। जाहिर छ, हामी मार्शल Khudyakov थियो थाहा थिएन। यो उल्लेखनीय मानिसको जीवनी - एक ठोस रहस्य।
रहस्य, जुन कुनै संकेत
Cavalryman र एक जवान Aviator, भविष्यमा एयर मार्शल SA Khudyakov यो सिर्फ यति लाल र सोभियत सेनाले मा ज्ञात छ। अन्तर्गत आफ्नो काल्पनिक नाम उहाँले नै नाम Aviator मा अध्ययन गर्न थाले अन्तर्गत उहाँले युक्रेनमा सेवा 1931 सम्म Tiflis सेवा गरें। सर्गेई उहाँले नै नाम महासेनानीले को श्रेणीका गुलाब अन्तर्गत, त्यो पश्चिमी सैन्य क्षेत्र आज्ञा जब थियो। त्यसपछि त्यहाँ मार्शल Khudyakov उड्डयन जसको जीवनी obscurity मा shrouded यो दिन छ, थियो।
उहाँले धेरै सैन्य पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उहाँले पार्टी र संसारको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण घटना रूपमा चिनिन्छ। उहाँले मा मार्शल Khudyakov थियो भन्ने तथ्यलाई पनि याल्टा सम्मेलन, stalin, रूजवेल्ट र चर्चिल उपस्थित थियो। सर्गेई-Armenak सहयोगिहरु त्यसपछि Antonov र Kuznetsov, सोभियत सेना को उल्लेखनीय अधिकारीहरू थिए सम्झनुहोस्। यो जटिल वार्ता सञ्चालन सक्षम सर्वोत्तम पेशेवरों थियो।
Armenak सर्गेई, अझै पनि पौराणिक कसरी बन्न सिक्न। पहिलो - सबैभन्दा रोमान्टिक। के तपाईं विश्वास भने, उनले नै नाम छ जो एक सह-कार्यकर्ता, सर्गेई Khudyakov थियो। Ostensibly तिनीहरूले बाकु ओसारपसार थिए जो एक नौका, sunk थियो, र Sergey स्पा Armenak पौडी खेल्न सक्ने छैन। पौराणिक कथा दुई अधिकारीहरु त्यसपछि मित्र बन्नुभयो, र mortally Sergey घाइते भएको मरिरहेका, एकचोटि आफ्नो तरवार र आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी आफ्नो नाम bequeathed भन्ने यो छ। र यो कथा यो मा राम्रो र epochal, तर कति सत्य देखिन्छ? यो साँच्चै मार्शल Khudyakov देखा छ? आत्मकथा किनभने यो अवस्थित छैन, यो बारे केहि भन्न भएन।
संवाददाता लिजेन्ड (कथित) सहयोगिहरु मार्शल र आफ्नो उप बताए। त्यो केवल आफ्नो दायाँ मन Khudyakov कसैले गोप्य यति नाजुक बताउन सक्ने विश्वास गर्न हुँदैन मा कसैले छ। उहाँले यो आफ्नो superiors र सहयोगिहरु को गोलीबारी दस्ते अन्तर्गत हुन्छ भनेर बुझ्न सकिएन। तथ्यलाई अचानक आफ्नो subordinates वास्तवमा कुनै पनि को व्यक्तिगत फाइल मा slightest परिवर्तन आत्मकथात्मक जानकारी प्रतिबिम्बित थिएन कि बाहिर गरिएका जब टीम, तुरुन्तै पत्ता र SMERSH रिपोर्ट गर्न आवश्यक हुनेछ भन्ने छ।
दोस्रो लिजेन्ड को बारेमा बताउँछ "अशुभ जनता Commissar।" यो मार्शल Khudyakov र Beria लिङ्क। Armenak टेलिफोन अपरेटर कथित काम शंकास्पद भविष्यमा जनता Commissar र ब्रिटिश वाणिज्य दुत बातचीत देख्यौं। सचेत हुन उहाँले एक सन्देश KGB स्थानीय शाखा देखि, आफ्नो वास्तविक पहिलो र थर हस्ताक्षर प्रवाह। को Cheka केही नभएकोले Armenak बदला डर मान्ने, आफ्नो आत्मकथा परिवर्तन थियो। त्यो केवल कुनै टिप्पणी, न त त्यहाँ अभिलेख कुनै पनि यस्तो जानकारी छ।
न्यायाधीश: - 19 वर्ष समयमा Armenak पुरानो लरेन्स 16 वर्ष थियो। तिनीहरूले नै उमेर थिए, र Beria तरिका को scammer परेशान गर्न कुनै शक्ति थियो। किन Armenak डर लरेन्स, उहाँलाई कुनै खतरा बस शारीरिक प्रतिनिधित्व भएको छ छैन? भविष्यमा Commissar एक गाढा गल्ली उहाँलाई waylay निर्णय भनेर विश्वास गर्न गाह्रो ...
युवा को गल्ती
एउटा काल्पनिक रूसी नाम प्रयोग गरेर लाल सेना मा सेवा लागि साइन अप: सायद, आफ्नो समय मा मार्शल Sergey Aleksandrovich Hudyakov युवावस्थामा निहित गल्ती गरे। सायद त्यो रूसी को बाँध्न मार्फत तोड्न सजिलो हुनेछ भन्ने लाग्यो। ती वर्ष मा आईडी कार्ड लगभग अस्तित्वको छैन, र नराम्ररी लडाकूको आवश्यकता छ जो रातो सेना, एक रेकर्ड छेडा "वाहक विधि।"
सायद, यो Hudyakova म वी प्रकृति अवस्थित छैन। तर यो अर्को परिस्थितिमा को प्रश्न उठ्छ: रूसी साम्राज्य वा सोभियत संघ को कुनै पनि आर्मेनियालीहरूको र अन्य राष्ट्रका कुनै दमन अवस्थित छैन छ। यो एक्लै Bagration उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ! त्यसैले यसलाई Armenak अर्को नक्कलको लिए के? कुनै जवाफ।
खैर, Khudyakov को बाकु Commune को कागजातहरू मा एक शब्द छ। कथित Armenak र Sergey सेवा जो रेजिमेन्ट, को पनि, बस अवस्थित छैन। र भने देखा जो Volsk शहर, मा "नै" Khudyakov, कि नाम मानिसहरूलाई कहिल्यै अस्तित्व। र फेरि, लाल सेना रेकर्ड गर्दा Armenak छ जो जन्म मिति, - वास्तविक कुरा। यो यति पनि जन्म पूर्णतया नै मिति संग, त्यो केही कागजातहरू अवस्थित व्यक्ति लिए कि मान गर्न गाह्रो छ।
यो मार्शल आफूलाई अनुसन्धानकर्ताहरूका उनको कहानी बताउन खोजिरहेका थिए भनेर धेरै सम्भव छ। तर एक व्यक्ति जो, केही अरुको अहित गर्ने इच्छा बिना आफ्नो जीवनी संग "भड्काए अप" यस्तो उच्च कार्यालय छ कि जसले विश्वास थियो? त्यसैले शक जन्म थिए स्पष्ट छैन कतै बाहिर छ। को बाकु Commune को कागजात कुनै पनि Armenak वा Khudyakov छैन: साथै, अनुसन्धानकर्ताहरूका बस जाँच गर्न केही गरे। यो जासूसी को व्यक्ति संदिग्ध गर्न साँच्चै समय छ!
सायद, पूर्व अधिकारी को पहिचान यातना अन्तर्गत ढकढक्याउन। मार्शल सर्गेई Khudyakov 1918 मा जासूसी उद्देश्य लागि, Englishman विल्सन द्वारा recruited थियो "स्वीकारे"। SMERSH लाग्यो Khudyakov-Hanferyants थुनामा र हस्तक्षेप को राजनीतिक विरोधीहरूले escorting सेवा गरे। को "पहिचान" को समयमा Khudyakov को बिरामी-fated दण्ड 26 बाकु commissars भाग लिए दाबी।
निश्चय पनि अनुसन्धानकर्ताहरूका बस के छानबिन अन्तर्गत व्यक्ति आरोपबाट, र यसैले थियो समयमा बाकु काम र कब्जा थिए जो वास्तविक ब्रिटिश जासुसहरूलाई, उहाँलाई माथि गाँसिएका कुनै विचार थियो। Khudyakov अन्तमा आफ्नो "misdeeds" फेब्रुअरी 19, 1946 स्वीकार गर्न बाध्य: दिन उहाँले पहिलो आफ्नो केरकार एक प्रोटोकल हस्ताक्षर गरे। र त्यसपछि पनि यो मार्शल विरुद्ध कुनै वास्तविक प्रमाण थिएन रूपमा, एक परिणाम मुनाहरू। मात्र मार्च मा त्यसै वर्ष, आफ्नो गिरफ्तारी लागि उर्दी प्रदान गरिएको छ! वास्तवमा, सारा वर्ष Huyakov अवैध थुनामा रहे। र केवल बीचमा (!) मा 1947 पहिलो बाहिर दोषी जूरीको फैसला पढ्न थियो।
तपाईं पाठ पढ्न भने कुरा पनि अधिक भ्रामक बन्न: के काल्पनिक Recruiters आफ्नो protégé देखि नाम परिवर्तन आवश्यक? धेरै लाभदायक यदि यो शङ्काको जगाउने छैन ताकि, वास्तविक संसार डाटा प्रदान गर्न सक्छन्! एउटै निष्कर्ष मामला Khudyakov रहे-जांच जो सैन्य Collegium, सदस्यहरू आइपुगे। यसबाहेक, यो स्पष्ट भयो, र अर्को मेहनत मार वास्तवमा: यो बाहिर जान्छ कोसँग ती मानिसहरू जडान कि मार्शल NKVD, ब्रिटिश संग लिंक भइरहेको आरोप कहिल्यै! तिनीहरूले आशङ्का के को अधिकतम - विरोधी-सोभियत आन्दोलन!
यो मार्शल सर्गेई Khudyakov उड्डयन विरुद्ध मामला बस mediocre निर्मित भनेर बाहिर जान्छ। यो र अन्य तथ्य कुरा। जो आयुक्त को मृत्यु को सबै परिस्थिति थियो ए आई Mikoyan, बारम्बार र विस्तार जांचकर्ताओं, धोकाको आदर को आशङ्का गर्दा र एक समयमा यो बारेमा भन्नुभयो। त्यो केवल एक प्रत्ययनीय विवरण तरिका को मार्शल को संलग्नता संकेत छ, हो उसलाई बाहिर दस्तक सकिएन, त्यो साँच्चै यो बारे केहि थाहा थिएन।
त्यसपछि, मामला, को ideologists एक एम डी Ryumin, को केरकार प्रोटोकल मा फिट कसरी र के हराएको जानकारी बताए। को प्रतिवादी पनि एम टी Lihachev सैन्य Collegium, कसरी र Khudyakov गरेको "गवाही" को क्रूर बिट को के विधिहरू द्वारा को जांचकर्ताओं बताए।
के सबै बाकु Commissars भयो?
सामान्य मा, कुनै पनि आधुनिक इतिहासकार मात्र मामला आयुक्त गर्न Khudyakov "सी" गर्ने प्रयास बस stupidly कसरी रमाइलो गर्न सक्छौं। नोट: उहाँले आरोप थियो "escorting convicts।" बाकु को आयुक्त झ्यालखानाको छोडेर कुनै पनि जटिलताहरू बिना डुङ्गा मा जान सक्षम थियो कि यस्तो भद्रगोल मा शासन गरे: त्यो बस छैन mythical convoy थियो छ। बोर्ड mutiny मा, जसमा कप्तान बस पाठ्यक्रम Krasnovodsk मा जान बाध्य। यात्रा को कागजात अनुसार, Khudyakov न त Hanferyantsa न त छैन बोर्ड मा थियो ...
धेरै वर्ष बितिसकेका छन्। यो देश उथलपुथल को एक अविश्वसनीय रकम ल्याए जो बीसौँ शताब्दीका, समाप्त भयो। मार्शल Hudyakov Sergey Aleksandrovich (Armenak Artemovich Hanferyants) फेरि सबै इन्साइक्लोपीडियाहरूले देखा पर्छ। आफ्नो नाम रूस र आर्मेनिया मा revered छ। यति लामो समय येरेवन मा पहिले यहाँ जन्म भएको थियो जो ठूलो मानिस, समर्पित monograph प्रकाशित गरेको छैन। महान् Taghlar 25 वर्ष काम संग्रहालय Khudyakov-Hanferyantsa मा। एए Hanferyantsa - सडकमा एक Alaverdi एस ए Hudyakova को शहर पछि नाम छ।
यो असाधारण मानिस कहिल्यै आफ्नो व्यक्तित्व परिवर्तन गर्न उहाँलाई बाध्य जो परिस्थिति को गोप्य को गम्भीर गर्न लगे। दुर्भाग्यवश, हामी के घटना वास्तविक कारण थाहा असम्भाव्य छन्।
दुनिया मा "एच" मा सबै भन्दा प्रसिद्ध नाम
अमेरिकी-मेक्सिकन युद्ध, 1846-1848 वर्ष। शत्रुता को प्रकोप, को कमान्डरहरु, विवादित क्षेत्रहरू
3 युक्रेनी अगाडि: लडाई बाटो। 3rd युक्रेनी फ्रंट: संरचना
हिटलर शक्ति आए। शक्तिको हिटलर गरेको वृद्धि लागि कारण
औद्योगिक दुर्घटना प्रमाणित
संडसी र संडसी: विपरीत (फोटो)
ओडेसा ओपेरा र ब्यालेट थिएटर: ठेगाना इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको
अलेक्जेन्डर Shirvindt: जीवनी, Filmography, परिवार